Nke a ga-abụ ihu igwe na Balearic Islands na 2038 | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụ ezie na o siri ezigbo ike ịmata etu ihu igwe ga-esi mee n’ime afọ iri ma ọ bụ karịa, taa anyị nwere mmemme nwere ike inyere ndị na-ahụ maka ihu igwe na ndị nwere mmasị ihu igwe aka ịmata ihe nwere ike ime. Ya mere, onye bụbu onye nlekọta mpaghara nke Mlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe (AEMET) na Balearic Islands, Agustí Jansà, nwere ike ịkọwara Diario de Mallorca ihe ndị na-echegbu onwe ha.
Dị ka ọkachamara ahụ si kwuo, ọ gwụla ma ewerela usoro dị egwu, ọdịnihu ga-adị ka awọ. Nke a bụ otú ihu igwe ga-adị na Balearic Islands na 2038.
1 Atọ ogo ịrị elu
2 Oke osimiri ga-ebili centimita iri abụọ na ise
Atọ ogo ịrị elu
N'oge a, ọnọdụ okpomọkụ nke mbara ala arịgoro site na ihe dịka 1,4 Celsius kemgbe 1880. Ọ nwere ike iyi obere uru, mana ọ na-ezuru imebi ihe ndekọ dị mkpa kwa afọ. Nakwa, na Balearic akipelago site na afọ 2038 okpomọkụ ga-eru ogo 3 dị elu n'oge ọkọchị. Oge oyi ga-aga n'ihu na-eme ka ọ dị nro, na ụkpụrụ ndị nwere ike ịbụ ọkara ogo ogo. Yabụ inwe mmetụta na "ọdịda adịghị" ga-aga n'ihu na-eto ka oge na-aga.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka okpomọkụ nke oke osimiri, n'oge ọkọchị, ọ nwere ike ịbụ ọkwa dị elu, nke ga-enwe mmetụta maka posidonia yana, maka anụmanụ.
Oke osimiri ga-ebili centimita iri abụọ na ise
Ihe centimita 25 nke ọ na-atụ anya na ọ ga-ebili na ụkpụrụ nwere ike ọ gaghị adị ukwuu, mana ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na isi obodo ahụ, Palma, fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa mmiri, Enwere ike ịhụ ya na ụfọdụ osimiri ga-emetụta. Nke ahụ apụtaghị na mgbe ihu ihu igwe dị nso ma mmiri dị iwe, ihe egwu nke idei mmiri ga-abawanye.
Ọ bụrụ na enwere ihe dị mma na nke a niile, ọ bụ n'ezie na etinyego ego ka ọ bụrụ na ọkara nke ụgbọ ala ndị na-agagharị bụ eletriki, nke mere na anyị ga-enwe obere agwaetiti dị jụụ.
Iji gụọ akụkọ zuru ezu, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Nke a bụ otú ihu igwe ga-adị na Balearic Islands na 2038
Ihe niile na - eme n’ụwa bụ maka mmadụ karịa ibibi ebe obibi anyị, anyị gaara elebara ya anya dịka ihe kachasị oke ọnụ ahịa anyị nwere, emela ngwa ngwa mgbanwe ihu igwe, ọ bụ ya mere anyị ga - eji bido ilekọta ụwa anyị anya igbukpo osisi na-emenyụ ụmụ anụmanụ wdg